စိတ်ဝင်စားစရာ ဖတ်သင့်သည်စာများ Archives - ဗေဒင်ဝါသနာအိုး
Category: စိတ်ဝင်စားစရာ ဖတ်သင့်သည်စာများ
တချို့လူ​တွေ ​​ပြောကြ​တဲ့ စကားရှိတယ်​။
နှုတ်ကြမ်းတာ ဘာဖြစ်​လည်း ။
မှန်​ပါတယ်​ နှုတ်ကြမ်းလို့ ​​သူတစ်ပါးက
ဖြစ်​ခြင်​မှဖြစ်​မှာပါ။ဖြစ်​တာ ခံရတာက ကိုယ်​ပါ ။
အဗ္ဗပါလီပြည့်​တန်​ဆာမက ရုပ်​ရည်​လှပလို့ ဟိုမင်းက
လိုချင်​ ဒီမင်းက ရချင်နဲ့ သူ့​ကြောင့်​စစ်​ဖြစ်​မှာစိုးလို့
​နေမ​ကောင်းတဲ့ ရဟန္တာမကြီး ချွဲသလိပ်ဖိတ်​စင်​သွားတာကို ဘယ်​သူမှန်းမသိပဲ စည်းကမ်းမဲ့တယ်​ ​စေတီရင်​ပြင်​​ပေါ်
ဘယ်​ပြည့်​တန်​ဆာမက တံ​​တွေး ထွေးသွားလဲလို့
တရား​ဟော အ​တော်​ဆုံးဖြစ်​တဲ့ ခုဇုတ္တရာဆိုတဲ့
ခါးကုန်​မ​လေးဟာ ဒီဘဝ ပဋိကတ်​​ဆောင်​ အမျိုးသမီးဖြစ်​ရပြီး ဘာ​ကြောင့်​ ခါးကုန်းရလဲဆိုရင်​ အတိတ်​ဘဝ အလှူခံကြွလာတဲ့ ပ​စ္စေကဗုဒ္ဓတစ်​ပါးက ခါးကုန်းတာကို သူငယ်​ချင်း​တွေ​ရှေ့ ဟာသအဖြစ်​ ဖလားကိုင်​ပြီး ​အိမ်​မှာလာတဲ့
ကိုယ်​​တော်​​လေးက ​ဟောဒီလို ခါးကုန်​​လေးပါလို့
ဟန်​အမူရာလုပ်​ ​ပြောင်​ခဲ့လို့ ခါးကုန်းဖြစ်​ရတာပါ။
သူများကို မကဲ့ရဲ့ဖို့ ကြမ်းတမ်းတဲ့စကား​တွေနဲ့ မ​ပြောဖို့ပါ။
မြတ်​စွာဘုရား သုန္ဒရိတိတ္ထိ မိန်းမပျို
စိဉ္ဇမာနတို့ စွပ်​စွဲခံရတာဟာ နုစဉ်​အ​လောင်း​တော်​ဘဝက
ပ​စ္စေကဗုဒ္ဓကို မိန်းမပုံစံဝတ်​ပြီး လူထင်​လွဲ​အောင်​ပြုခဲ့လို့တဲ့။
သူရဲ့ ဘဝတသက်​တာ စာအုပ်​ထဲမှာ
ကဲ့ရဲ့တာ ​နောက်​​ပြောင်​တာကအစ ကိုယ်​တိုင်​​ရော
​ပျော်​​စေချ င်​လို့ ဟာသလုပ်​တာ​ကောင်းပါတယ်​
သို့​သော်​လည်း အရေမရ အ ဖတ်မရ
ဝဋျကွှေးကွောကျရငျ နှုတျကို သတိထား
တခြို့လူတှေ ပွောကွတဲ့ စကားရှိတယျ။
နှုတျကွမျးတာ ဘာဖွဈလညျး ။
မှနျပါတယျ နှုတျကွမျးလို့ သူတဈပါးက
ဖွဈခွငျမှဖွဈမှာပါ။ဖွဈတာ ခံရတာက ကိုယျပါ ။
အဗ်ဗပါလီပွညျ့တနျဆာမက ရုပျရညျလှပလို့ ဟိုမငျးက
လိုခငျြ ဒီမငျးက ရခငျြနဲ့ သူ့ကွောငျ့စဈဖွဈမှာစိုးလို့
နမေကောငျးတဲ့ ရဟန်တာမကွီး ခြှဲသလိပျဖိတျစငျသှားတာကို ဘယျသူမှနျးမသိပဲ စညျးကမျးမဲ့တယျ စတေီရငျပွငျပျေါ
ဘယျပွညျ့တနျဆာမက တံတှေး ထှေးသှားလဲလို့
တရားဟော အတျောဆုံးဖွဈတဲ့ ခုဇုတ်တရာဆိုတဲ့
ခါးကုနျမလေးဟာ ဒီဘဝ ပဋိကတျဆောငျ အမြိုးသမီးဖွဈရပွီး ဘာကွောငျ့ ခါးကုနျးရလဲဆိုရငျ အတိတျဘဝ အလှူခံကွှလာတဲ့ ပစ်စကေဗုဒ်ဓတဈပါးက ခါးကုနျးတာကို သူငယျခငျြးတှရှေေ့ ဟာသအဖွဈ ဖလားကိုငျပွီး အိမျမှာလာတဲ့
ကိုယျတျောလေးက ဟောဒီလို ခါးကုနျလေးပါလို့
ဟနျအမူရာလုပျ ပွောငျခဲ့လို့ ခါးကုနျးဖွဈရတာပါ။
သူမြားကို မကဲ့ရဲ့ဖို့ ကွမျးတမျးတဲ့စကားတှနေဲ့ မပွောဖို့ပါ။
မွတျစှာဘုရား သုန်ဒရိတိတ်ထိ မိနျးမပြို
စိဉ်ဇမာနတို့ စှပျစှဲခံရတာဟာ နုစဉျအလောငျးတျောဘဝက
ပစ်စကေဗုဒ်ဓကို မိနျးမပုံစံဝတျပွီး လူထငျလှဲအောငျပွုခဲ့လို့တဲ့။
သူရဲ့ ဘဝတသကျတာ စာအုပျထဲမှာ
ကဲ့ရဲ့တာ နောကျပွောငျတာကအစ ကိုယျတိုငျရော
ပြျောစခြေ ငျလို့ ဟာသလုပျတာကောငျးပါတယျ
သို့သျောလညျး အရမေရ အ ဖတျမရ
ကိုယ်က အချစ်အတွက် ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်!
မေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့်ရင်း ရလာမယ့် အဖြေက . . . ဝေါင်း ..
မေးခွန်းဖြေရတာလည်းအရမ်းလွယ်ကူပါတယ် မေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီ မိမိရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးကို မှတ်ထားရုံပါပဲ။ အဖြေတွေကို မေးခွန်းတွေ ပြီးတဲ့အခါ တွေ့ရမှာပါခင်မျ။
မဖြေရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖြေဖို့ လက်တို့လိုက်ဦးနော် . .
Ready??? 123